Ingabe ukuxhumanisa okuzenzakalelayo kwakha ingozi kwi-website yokusesha injini?
Kukhona ukholelwa ukuthi isakhiwo sokuxhumanisa isixhumanisi siphelile ngo-2017. Lo mqondo uxoxwe ngezikhathi eziningi, kepha nokho, akekho isitatimende esicacile kuso.
Ngokuvamile, ukwakha isixhumanisi sombhalo kuyinkqubo yokuzama ngobuqotho ukwandisa inani lezixhumanisi ezingenayo kumthombo wewebhu. Kuyindlela edla isikhathi esidinga imizamo eminingi. Ukwakhiwa kokuxhumanisa kwamagama ngokuvamile kuhlotshaniswa nendlela ephilayo yokwenza izixhumanisi.
Uma ucwaninga amasayithi asezingeni eliphezulu ku-niche yakho ubona inani lezixhumanisi ezikhomba kubo. Unamakhulu ezinkulungwane zezixhumanisi ezingenayo kusuka emithonjeni yewebhu yegunya lesiphezulu nephakathi. Yiqiniso, amaphrofayili abo okuxhumanisa awakhuliswa ebusuku. Lezi zindawo eziphezulu ze-TOP zithola imiphumela enjalo ngokusebenza ngokuhlakanipha nokudala izixhumanisi ezingenayo ngesandla.
Kule ngqikithi, sizokhuluma ngamasu wokuqamba ama-manual kanye nokuzenzakalela. Ngaphezu kwalokho, sizoxoxa ngokuthi iGoogle idweba kanjani umklamo phakathi kwemiphumela yokwakhiwa kwezixhumanisi zemvelo nokungajwayelekile. Ngizobhala uhlu oluwusizo kakhulu lwama-manual ne-backlink oluzokwenza kube nemiphumela emihle ye-SEO.
Indlela yokwakha isixhumanisi esingalungisa ngayo ingathuthukisa isigaba sakho sesayithi?
Ezinsukwini zethu ukudala izixhumanisi zibe nzima kunanini ngaphambili ngenxa yomncintiswano ophezulu emakethe yedijithali kanye nezinguquko eziqhubekayo zokuguqulwa kwe-algorithm. Yiziphi izindlela zokwakha izixhumanisi i-Google ezamukelayo namuhla zingase zibe amasu we-spammy kusasa. Kodwa-ke, naphezu kwazo zonke lezi zinto ezimbi, ama-backlink aqhubeka ehola amandla okushayela angathuthukisa isayithi lakho lesayithi futhi akhiphe ithrafikhi kuwebhusayithi yakho. Abaphathi beWebhu abafuni ukuchitha isikhathi esiningi ekudaleni izixhumanisi eziphilayo ngokubhekisela kwisofthiwe yokwakha isixhumanisi esizenzekelayo noma ukufuna amathuba okuzwakalisa isixhumanisi esikhokhelwayo. Nokho, njengendlela yokubonisa, akukho okungcono kunokwakhiwa kwesixhumanisi semvelo. Akufanele uhileleke ekusebenzeni kwamasu wokuqamba amanga njengoba kuzotholakala ngempela nge-Google. Manje sisezinqenqemeni ezintsha zokusebenza kwe-injini yokusesha futhi ukuthola ama-backlink esheshayo we-spammy kungabhubhisa yonke imizamo yakho ye-SEO kanye nedumela lomkhiqizo.
Isixhumanisi sombhalo wokuqhafaza ngokumelene nokuzenzekelayo
Njengoba inkathi yokuqinisa isixhumanisi esiphansi isiphelile, sidinga ukudala isixhumanisi ngokulinganayo. Yingakho siqoqa amasu omsebenzi wokuxhumanisa okusebenzayo azosebenza kahle.
Iforamu namazwana ebhulogi
Amazwana yindlela elula futhi ephumelelayo yokuthola izixhumanisi, uma nje ushiya kuzo ezifanele futhi eziphezulu PR imithombo yewebhu. Amazwana akho kudingeka ahlobene nesihloko sengxoxo futhi abukeke emvelo phakathi kwabanye. I-Google ngeke ihlawulise isayithi lakho uma ukuphawula kwenziwa ngesandla. Uma senziwe ngesandla, kubonakala kunengqondo, sinamathele kulelo phuzu futhi linenani labanye abafundi. Noma kunjalo, ngokusho kwe-Google Webmaster Guidelines, i-forum yokubeka amazwana ngezixhumanisi ezilungiselelwe kokuthunyelwe noma isignesha ngeke kubalwe njengekhwalithi futhi izofanelwa izigwebo.
. Abanye abakwa-webmasters bathi bangumasu we-spammy wokudala izixhumanisi. Nokho, iqiniso litsheliwe, uma lenziwe kahle, lizoletha imiphumela emihle yokwenza ngcono. Ngizokhuluma ngokubhalisela izivakashi ezigunyazayo njengengxenye yomkhankaso wokwenza umsebenzi wokuwina. Udinga ukwakha okuqukethwe ngenhloso eyodwa kuphela yokuthuthukisa isikhundla sakho sesayithi, kodwa ngenhloso yokuletha ukubaluleka kubafundi bakho. Uma wenza okuqukethwe kwakho nomfundi engqondweni, ungasebenzisa ukubhulolwa kwabavakashi njengendlela yokuphepha yokuxhumanisa yomsebenzisi ephephile Source .